Nianjera tamin'ny tendrombohitra tany Torkia ny fiaramanidina rosiana namono ny olona rehetra tao anatiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Turkey Breaking News » Nianjera tamin'ny tendrombohitra tany Torkia ny fiaramanidina rosiana namono ny olona rehetra tao anatiny
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News • Vaovao isan-karazany
Fiaramanidina mpamono afo firy maromaro no nalefan'i Rosia tany Torkia mba hanampiana ny firenena amin'ny tolona ataony amin'ny doro tanety, izay nampijaly azy tao anatin'ny herinandro lasa izay.
Nianjera tany Torkia androany ny fiaramanidina mpamono afo Rosiana.
Toa tsy afaka nahazo toerana ambony ilay fiaramanidina taorian'ny nanipazany rano tao anaty afo.
Hatreto dia mbola tsy nisy fampahalalana momba ny antony mety hitrangan'ny fianjerana.
Rosiana Beriev Be-200 mpamono afo no nianjera tamin'ny tendrombohitra tany amin'ny faritra atsimon'i Marash any Torkia tamin'ny sabotsy.
Amphibious daholo ny olona ao anaty sambo Be-200 fiaramanidina– ny mpanamory fiaramanidina rosiana sy ny tompon'andraikitra tiorka - no maty.
Araka ny an'i Russia Ministeran'ny fiarovana, nisy miaramila miaramila rosiana dimy sy tompon'andraikitra tiorka telo tao anaty fiaramanidina.
Nianjera ny fiaramanidina fotoana fohy taorian'ny namoahany rano tamin'ny iray tamin'ny fahatezerana Doro tanety tiorka. Toa tsy afaka nahazo haavony ampy ny fiaramanidina rehefa avy nanary ny entany, ary nianjera tany an-tendrombohitra.
Hatreto dia mbola tsy nisy fampahalalana momba ny antony mety hitrangan'ny fianjerana. Ny tafika rosiana dia efa nandefa ekipa mpanao famotorana any Torkia hijerena ny toerana nitrangan'ny fianjerana.
Fiaramanidina mpamono afo vitsivitsy no nalefa tany vorontsiloza nataon'i Russia hanampy ny firenena amin'ny tolona ataony ny afo, izay nampijaly azy tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, ny Be-200 nianjera dia niraikitra tamin'ny sampana mpamono afo tao Adana.